Fahalalahana maneho hevitra Lasa Kianjan' ny demokrasia ny « facebook »
Rehefa tsy omena sehatra na toerana hahafahany maneho hevitra ny olona, toy nykianjan` ny Demokrasia etsy Ambohijatovo dia io
manatosaka ny hetahetany sy ny hatezerany anaty“facebook”io na koa lasa romotromotra ka mikorontana ny fiarahamonina. Misy antony ireo firenena mandroso matoa mamela malalaka ny olona hilahatra hilanja sorabaventy sy hitabataba an-dalambe. Na ireo mpitandro filaminana aza efa nofanina manokana amin`ny fiatrehana an`izany. Misy ilay fomba fiasa hoe “gestion democratique de la foule” ohatra: efa nahazo fiofanana momba an`io ny mpitandro filaminana Malagasy. Mety ny tsy fisian`io fahafahana maneho hevitra amin’ny fotoana rehetra io no mahatonga ny krizy miverimberina eto satria rehefa isaky ny 5 taona kosa vao afaka midina an-dalambe ny olona. Efa ambony be ny tahan'ny fahasosorana ka mitroatra. Noho izany, atao mazava ny lalàna ary ampahafantarina tsara sady beazina ny olom-pirenena hahay mampiasa ny zony sy hahafantatra ny adidy aman'andraikiny. Ireo firenena matanjaka toa an`i Etazonia, Frantsa, Alemaina, Angletera, Espaina, Italia... dia tena henjana anie ny fanehoan-kevitra sy ny grevy any fa mikaroka hevitra handaminana azy ankoatra ny fisamborana sy fanagadrana ny mpitondra. Firenena manankarena sy mandroso be daholo ireo ary manana “culture politique” efa avo lenta ny mponina ao aminy ka misy ohatra tsara.azo ianarana.